राप्ती नगरपालिकामा तयार भयो पुर्वी चितवन कै पहिलो क्रिकेट ट्रेनिङ पिच - सजिलो पाटी
राप्ती नगरपालिकामा तयार भयो पुर्वी चितवन कै पहिलो क्रिकेट ट्रेनिङ पिच
२०७७ पुष १६, बिहीबार २०:५१
राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित चौकीडाँडामा पूर्वी चितवनकै पहिलो क्रिकेट ट्रेनिङ पिच बनेको छ । राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ बाट विनियोजित तिन लाख बजेटमा थप ३५ हजारको लगानीमा पिच निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो।
“तीनवटा क्रिकेट पिच बनेको छ। तिहार भन्दा अगाडिबाट काम सुरु भएता पनि चाडपर्वको कारणले अलि पछाडि धकेलियो।” पिच निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सफल खरेलले टेलिफोनमा जानकारी दिदैँ भने, “यो अत्ति नै सराहनीय कार्य रहेको छ। यसले क्रिकेट बिकासको लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका त रहने नै छ। हामीलाई साथ दिनुहुने राप्ती नगरपालिका, वडा कार्यालय समस्त जनप्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।” उनले थपे।
त्यस्तै राप्ती नगरपालिका वडा नं.५ की वडा अध्यक्ष मेनुका पाठकले युवा तथा खेल विकासको लागि आफु र वडा सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेलकुद बिकासको लागि धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रमहरु युवा माझमा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभयो।